Xanta: Apple Watch 2 wuxuu yeelan doonaa shaashad khafiif ah | Wararka IPhone
Xanta: Apple Watch 2 wuxuu yeelan doonaa shaashad khafiif ah, laakiin wuu ilaalin doonaa naqshadda
Si ka duwan waxa ku dhaca iPhone-ka, Apple Watch badanaa ma shaandheeyaan sawirrada ama fiidiyowyada kahor waqtiga. Tani waa waxa dhacay sanadkii 2014-kii waana waxa dhacaya 2016-ka, marka xanta ay dhahaan Apple Watch 2. Waxa jira warar xan ah, kii ugu dambeeyayna wuxuu xaqiijinayaa in jiilka soo socda ee tufaaxada casriga ahi ay yeelan doonaan shaashad adeegsan doonta tiknoolajiyadda "One Glass Solution" oo noqon doonta mid khafiif ah.
Xanta ayaa dib noogu soo noqotay DigiTimes, dhexdhexaad ah oo leh guulo isku dhafan oo saadaalin ah, laakiin markan ilaha ay leeyihiin waxay leeyihiin magac: TPK Holding. Cusub OGS guddi taabasho Waxay la timid dhibaatooyin wax soo saar (hore ayaan u soo maray tan ...), sidaa darteed waxaa la filayaa in marka hore aysan jiri doonin wax badan oo Apple Watch 2 ah oo la heli karo.
Apple Watch 2 wuxuu yeelan doonaa meel ka sii badan gudaha jiilkii koowaad
Haddii aan iska indhatirno xanta, jiilka labaad ee Apple Watch wuxuu yeelan doonaa naqshad iyo cabbir la mid ah kii la soo bandhigay 2014, laakiin shaashadda OGS ayaa noqon doonta mid khafiif ah, sidaas darteed waxaa jiri doona meel badan oo gudaha ah oo lagu xareeyo, tusaale ahaan, a batari weyn.
Muraayadaha caadiga ah ee la taabto ayaa adeegsada qalab isku dhejisan, oo ay ku jiraan laba qaybood oo muraayad ah, oo loo yaqaan "galaaska dhalada." GOG waxaa loo isticmaalaa gudaha Bandhigyada OLED sida kuwii ay isticmaali jireen jiilkii koowaad ee Apple Watch.
Waqtigaan wax badan lagama oga waxa uu noqon doono Apple Watch 2, laakiin wararka xanta qaar ayaa sheegaya in si fiican banaanka u eegi doono ayna ku jiri doonto GPS, Cidhibta Achilles ee nuqulkii ugu horreeyay. Sidoo kale waxaa lagu xantaa inay la imaaneyso kamarad si ay awood ugu yeelato / u hesho wicitaanada FaceTime oo aan meesha laga saarin inay ku jiraan dareemayaal cusub. Sida had iyo jeer, waqtiga ayaa jawaabaha oo dhan na siinaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Xanta: Apple Watch 2 wuxuu yeelan doonaa shaashad khafiif ah, laakiin wuu ilaalin doonaa naqshadda
Ciribta Achilles ee ku saabsan gps? Waa maxay dibin daabyo !!! Maxaa loo yaqaan 'gps' ??? In la sameeyo isboorti? Beenlow !! Faa'iido intee le'eg ayay gps-ka saacaddaydu i siisaa haddii aan wado isku mid ah maalin kasta sameeyo !!! Haddii dadku ka baqayaan inay lumaan, isticmaal taleefanka gacanta, taas oo ka fiican!
Waxaan adeegsaday barnaamij leh gps iyo jijin cabiran bilaa gps natiijaduna ficil ahaan waa isku mid. Kaloriyo isku mid ah, tallaabooyin isku mid ah, dhammaantoodna waa isku mid. GPS ma caawiyaan wax.
Dadku waa dad doqon ah oo aad u xishood badan, waxay weydiistaan ​​oo weydiistaan ​​bulshit aan macquul ahayn, sida baabuurka Homer ...
Auxo 3 waa la cusbooneysiiyay taageerada iOS 9.2-9.3.3
Power Hover, robot skier oo raadinaya baytariyo barnaamijka usbuuca